Lokho kuzosithinta futhi uyozivikela izinyawo kancane phakathi nenkathi ebandayo? Yiqiniso, wathungela amasokisi kusengutsheni yoboya izingane! Uzokhetha ntambo, ukunakekelwa abanekhono futhi emnene kuzosiza ugcine kudingekile into ingane ikhabethe isikhathi eside. Kubalulekile ukukhetha ubukhulu ilungelo le-accessory ye, ngoba ukuthi uzwane oluncane ukudansela isiginci sakhe off izithende, kanti nguye omkhulu futhi kwenzekani esizowela phansi, "i inkositini."
Usayizi amasokisi zezingane
Ubukhulu yoboya amasokisi izingane zivumelana ubude unyawo futhi izicathulo obujwayelekile. Kufanele kukhunjulwe ukuthi into enjalo kwandisa umthamo imilenze, ngakho izicathulo uthenge sinalokho engqondweni.
ubudala Foot obuphelele, cm usayizi amasokisi isicathulo
izinyanga kuze kufinyelele 3 6-8 7 (6-8) -
izinyanga 6 8-10 9 (8-10) 17
enyakeni 1 10-12 11 (10-12) 18-19
iminyaka 1-2 12-14 13 (12-14) 20-22
3-4 iminyaka 14-16 15 (14-16) 23-25
iminyaka 4-5 16-18 17 (16-18) 26-28
iminyaka 5-7 18-20 19 (18-20) 29-31
iminyaka 7-9 20-22 21 (20-22) 32-34
iminyaka 10-12 22-24 23 (22-24) 35-38
Lapho uthenga nesisekeli ukuba banake kuhambisana Ubukhulu kucacise umenzi, njengoba abanye amafemu bachezuke kwezinkambiso yamukelwe. Lokhu kungenxa yokuthi kwabantu lokutshala incike ntambo Sock ukunitha futhi Uhlonze lwalo. Thenga into kusuka esitolo online, kuyafaneleka Ebheka phezulu usayizi etafuleni, basuke tingafundziswa isayithi ngayinye ukukhethwa imikhiqizo. Ngo sempahla ethengwayo esitolo, ubukhulu yoboya amasokisi izingane akhonjiswa kumalebula. Uvolo amasokisi izingane ngezandla kumele ukhethe "by iso".
Indlela ukukala ubude ngezinyawo?
Izilinganiso wenza ukusuka kwesinye isihloko ukuthi uzwane omude kunayo yonke ukuze engxenyeni ekude ye esithendeni. Kunezindlela eziningana ukusiza ukuthola ubude unyawo wengane.
ingane Umlenze ubekwe ephepheni, is zizungezwé ngumuntu nentaba, bese iphethini okuholela kukalwa obuphelele nombusi.
ishidi amakhadibhodi is eligoqiwe, onqenqemeni collar unamathele ifomu. Unyawo eqondiswa ukuze isithende is waphumula emdulini lokuqala le phephandaba, bese uphawu endaweni umunwe omude kunayo yonke.
izicathulo Usayizi insole zezingane ukufanisa Usayizi unyawo.
Izidingo eba yiqhwa zombili izinyawo, njengoba bangase ihluke nomunye ngumuntu isentimitha. Kulokhu, kunakwe ubude obuphakathi nendawo esitobhini (izibalo etholwe wafingqa futhi ehlukaniswa amabili). izinyawo Kala zezingane Kunconywa kusihlwa noma ngemva uhambo.
I ntambo okungcono kakhulu izingane
Kusukela ntambo, esetshenziselwa ijezi izesekeli imilenze, ithinta izinga izakhiwo, ukubaluleka izinto. Umkhiqizo akufanele kusenze ukulunywa sigwaze isikhumba obucayi ingane. Amasokisi Classic kuthiwa wathungela okumsulwa uvolo nemvu, ikamela, Llama. Admixture we imbuzi noma unogwaja phansi izinto unika umsungulo futhi kuyaqina. imikhiqizo ezinjalo efudumele, kodwa uzokhathala ngokushesha.
zenziwa isikhathi esingakanani ntambo acrylic noma izinto ekungcoleni kwakhe. Kuyinto impahla yokufakelwa ukuthi kahle ngesineke futhi inikeza abathengi kanye anhlobonhlobo imibala kanye amaphetheni. Lokuluhlaza lapho okuqukethwe acrylic ngamaphesenti angaphezu kwangu-50, kungukuthi Kunconywa imikhiqizo zezingane, ngoba efudumele esiwuhogelayo neze kabi igcinwe. Ingxube izakhiwo ezuzisayo uvolo ngesimo ukushisa nelokunika izikhwepha acrylic ivumela Ngohlelo yimpumelelo ngoba ukunitha.
Cashmere ntambo kusukela noboya Tibetan lubisi ngesisa esikhethekile ubuhlakani. Imikhiqizo ezenziwe le nto akusho ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu zesikhumba ebucayi izingane, ngaphezu, zingabantu okuhlala.
Merino ntambo - okunye ukukhetha kuhle izingane ijezi amasokisi. sesigcilikisha nomzimba omncane, ngakho lezi zinto ayimihle nenhle. Uvolo Merino imvu kuyabiza kakhulu ngaphezu kokujwayelekile.
ukunakekelwa kahle amasokisi wathungela
Ukuze into efudumele eside ngangokunokwenzeka ukulondoloza ukubukeka yokuqala futhi izakhiwo ewusizo, it is kwalandela wabheka emva kahle.
Uvolo amasokisi sisusiwe ngokuhlukile lonke izinto kule ihlelwa umbala (ukukhanya oku amnyama namakhaladi).
Sifakwe emanzini Kwenziwa kuphela emanzini abandayo (ngezansi degrees 30), ayisekho kwehora. lokushisa Water akufanele kube. Abakwazi kakhulu ukunqinda uvolo amasokisi izingane.
Laundry kwenziwa ngesandla, umshini uyakwazi ilimaze ntambo. Hlikihla into akunakwenzeka - kubalulekile ukuba cindezela. Welulekela bese ucindezela yoboya amasokisi akufanele kube.
Kungcono ukukhetha izihlanzi ekhethekile ukuthi Site ngokumnandi futhi knits.
Ngemva wokuhlanza amasokisi ithawula wesula yomiswa ku endaweni evundlile.
Indlela obumbene ingane amasokisi?
Yiqinisekise isisa ikhono yoboya amasokisi-heartedness umntwana othandekayo izingane ngezandla. Kunezindlela eziningi imikhiqizo ukunitha. Needlewoman ngokuvamile uthanda ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa 5-wakhuluma, kumbuthano. Ngo inqubo ungakha amaphethini ahlukahlukene noma inhlanganisela kushintshana umbala lokuluhlaza nokotini ngisho esikhundleni komunye nomunye. Ukuze ijezi esithendeni Kunconywa ukusebenzisa impahla ayazika. Sock Ready kungenziwa ukuhlotshiswa ngendwangu efekethisiwe noma Appliqué. Phakathi nomsebenzi kufanele acabangele Ubukhulu yoboya amasokisi izingane, ukuze ke abaziguquli umkhiqizo.
Siza lula izinaliti isiyingi. Kusukela indlela odlule inqubo Cishe efanayo, kodwa amathuba ukulahlekelwa noma yeqa iluphu ziyancipha zero. Crochet ikuvumela ukudala amasokisi nenhle futhi jumpsuit. Usayizi owesincane umkhiqizo kuthatha amahora ambalwa kuphela umsebenzi kusukela wezingubo abanolwazi.
Ngaphezu yalokho ezimnandi, ukufudumala imvuthu ozithandayo imilenze, ukunitha upholisa, iletha injabulo futhi kusiza ukuba uchithe isikhathi sakho khulula.
Boris Ekimov: lokusungula omlobi Russian